Kwinqaku lethu "Yithenga isilwanyana esitsha esinqabileyo" uya kufumanisa ukuba kuyafaneleka ukuqala isilwanyana esingaqhelekanga. Ngaba unqwenele ukuqala inyoka eyoyikisayo kwi-aquarium, okanye isicabangca? Yintoni efunekayo ukuze sikhule ezi zilo ekhaya?
Okokuqala, akufanele siyibale ukuba ezi zizilwanyana. Kwaye nantoni na ayenaye, babe neyabo ngaphakathi kunye nobuntu. Ngoko ke, akukho mfuneko ukuba ungathembeli ngokuthi ngokubeka isandla sakho kwi-aquarium nge-spider okanye inyoka, ayikwazi ukusabela kwizenzo zakho ngokukhawuleza.
Ukuze ufumane isilwanyana esingaqhelekanga, udinga imali eninzi. Kwaye akuthethi ngokuthenga, akukho. Inyaniso kukuba kufuneka uncelise okokuqala isilwanyana kuwe. Ngaba ulungele ukuhlawula imali eninzi ngokuthengwa kwesondlo okanye esinye isisetyenziswa sakho "sesilwanyana" xa ufumana umvuzo oqhelekileyo? Ngoko ke, ngaphambi kokuba wenze nantoni na xa uthengela isilwanyana, gqibo, kodwa kulungile?
Indlela efanelekileyo kukuqala isilwanyana esitsha, umzekelo, ikati okanye inja. Ndikholelwe, kuba ukuba uthenge isilwanyana esingaqhelekanga, awukwazi ukuyithinta ngokuqinisekileyo kwaye uyayixabisa, kuya kufuneka uhloniphe ubuhle kunye nokungaqhelekanga ngeglasi ye-aquarium. Ngentaka okanye inja yinto echaseneyo. Ezi zilwanyana zilindele ukuba abanikazi bothando, isisa kunye nabo bazimisele ukuzinikela ezandleni zabani na abafuna. Kwakhona kwaziwa ukuba iikati zinenzuzo enkulu-zinamandla okuphilisa ukuphilisa abaphathi babo. Umzekelo, uya kuba nesisu esiswini, ubeke ikati kwindawo ebuhlungu kwaye emva kwemizuzu embalwa intlungu iya kuphelisa.
Iibhobho ezahlukeneyo, izicabucabu kunye nezinye izilwanyana ezingaqhelekanga, ngelanga, zinegunya lokuphilisa.
Ikhumba ayifanelekanga ukuqala, kuba inkawu iyilwanyana ephosa kwinqanaba elithile. Kutheni, ubuza? Zama ukushiya i-monkey ngeeyure ezimbalwa wodwa ekhaya: xa ufika ekhaya awuqapheli ikhaya lakho. Ngako oko, olu khetho luya kwicala.
Inketho enkulu kakhulu yokuba unokukhonza njengengqungquthela okanye enye ingoma. I-Exclusive ilula: i-birdie ayiyi kukukhathaza ngokuchitha imali ngokutya kwayo, ngoko ukwenza ipayipi yekhaya kulula kunokuba ilula.
Izilwanyana ezininzi zinobubele kunye nokuzinikela enkosini yabo, ngoko ukuqala isilwanyana esingaqhelekanga akusona nto ikhethekileyo. Kulula kakhulu ukufumana intlanzi ye-aquarium, iintaka, i-parrot, inkonti okanye intshontsho. Enyanisweni, ebomini kukho inani elikhulu lezilwanyana ezidinga ukunyaniseka nokunyamekela. Kwaye ukubeka inyoka okanye isicabangca kwisigodlo akusona sikhethi esingcono.
Khawucinge nje ukuba ufakwa emgodini, uya kuba nomsindo? Ngokuqhelekileyo, uya kuthi. Yintoni iilwanyana? Musa ukumangaliswa xa uthanda kwakho kunye nokuzola ixesha lokuba inyoka iya kukuluma ngexesha elinye. Akukho silwanyana esiya kuthandana.
Imfashini yokuzalisa izilwanyana ezingaqhelekanga yenziwa ngekhulu lokugqibela eUnited States.
Isilwanyana esingaqhelekanga sisilwanyana esinqabileyo okanye esingavamile esicatshulwa njengesilwanyana. Kuqikelelwa ukuba malunga nama-15,000 iimfene zigcinwa ngabantu abazimeleyo njengezilwanyana zasekhaya eMelika. Ngokungafani nezinja kunye neekati, izilwanyana ezingaqhelekanga ezingahlali ekhaya, zihlala zasendle.
Izilwanyana zingabanjwa ikati, inja, kodwa ingesilwanyana esingaqhelekanga. Cinga kuqala, ngaba kufanelekile ukuletha isilo sasendle endlwini? Iinqununu zethu ziya kunceda ukwazi ukukhethwa kwesilwanyana. Cinga ukuba kuyafaneleka ukuba udale isilwanyana kwisango njengendlu yakho.
Ukuhamba nenja: iingcebiso kunye namacebo
Ukulahleka kweenwele kwizinja
Ziziphi iimbungu onokuzifumana kwikati okanye inja?
Ukuzalwa kweenja IsiNgesi Cocker Spaniel
Izilwanyana kwiindawo zokuhlala zanamhlanje
Ukunyamekela ikati yeSphynx
Uncedo ngeqabunga lomhlaba weepilisi
Iphaneli kunye nobuhla
Iibhonsi kunye ne-blueberries
Vibe Harsløf: imihlobiso elula yendalo
Ngaba uVictoria Daineko ugula? Abafaki bayalitshitshisa impawu zomculo we-anorexia
Yintoni abafazi abanokuyihlonela ngayo ubudlelwane?
Kungcono kakhulu ukulungisa ingxabano yentsapho
Iifomula zomzimba omhle kunye nobuso: Bala ukuba unjani
Ndiyakuvuyela ngoFebruwari 23 ngeesms - mfutshane, omhle, omhle - umzalwana, umhlobo, indoda, intanda ethandekayo - Imizekelo yeemms uyancoma ngoFebruwari 23 ukuba
Hen curry inkukhu
Ulunge kunye neminyaka
Ukulungiswa kwetafile yonyaka omtsha
Ikhekhe nge-chocolate cakeche
Umtshato waseTarasova noKostenko: UVictoria Lopyreva wagqiba umtshakazi, isithombe
I-Strawberry ice cream
Iipeya ezimbini zokubeka ipula